Dhibaatooyinka Saadka Saameynta Gawaarida ee Awoodda Ganacsi ee Adag | RayHaber | raillynews
HomeGUUDDhibaatooyinka Saadka Saameynta Gawaarida ee Awoodda Ganacsi ee Awoodda Leh
13 / 05 / 2020 GUUD, WADADA, Headline, baabuurta, TURKEY
Saadka gawaarida gawaarida ayaa lumiyay suurtagal ganacsi oo halis ah
Cudurka coronavirus ee ka dhacay Wuhan, Shiinaha oo ku faafay adduunka oo dhan, wuxuu saameeyey qaybo badan. Coronavirus wuxuu ku soo baxaa Shiinaha oo si dhakhso leh ugu faafa waddamada kale wuxuu sii wadaa inuu muujiyo saameyntooda qaybo badan. Dabcan, kama tagi karno annagoo aan sheegin saamaynta xun ee fayrasku ku leeyahay suuqyada adduunka ee hoos yimaadda saameynta caalamiga ah. Maaddaama Shiinaha ay ahayd suuq weyn, waxay ahayd waddanka ugu weyn ee iibiya wershadaha gawaarida caalamiga ah. Awoodda lagu fulinayo silsiladda sahayda ee warshadaha gawaarida iyo alaabada alaabada iyada oo aan la jabin waxay si buuxda ugu xiran tahay fulinta si habsami leh ee howlaha logistics. Dhoofinta iyo dhoofinta qaybta labadaba waxaa lagu rumeeysan yahay iyadoo la adeegsanayo habab gaadiid oo kala duwan marka loo eego baahida. Markan, soo dejinta gawaarida la soo dejiyo, la qabsiga dekedaha, u dhoofinta meelaha gawaarida la dhigto, howlaha canshuuraha laga qaado, rarida alaabada kale ee la dhoofiyo, rarida alaabada kor u kaca iyo rarida maraakiibta iwm. Hawlaheeda oo dhan waxay ku jiraan saadka gawaarida.
Soosaarayaasha gawaarida, oo joojiyay soo-saarkii ka yimid Shiinaha, halkaas oo fayrasku bilaabay inuu ku faafo, waxay sababtay soo-saareyaashu inay ku dhuftaan warshadooda maadaama fayrasku bilaabay inuu ku faafo Yurub. Intaa waxaa u dheer, soosaarayaal badan oo Mareykanka ah waa in ay joojiyaan wax soo saarkooda inta lagu gudajiray muddadan. Ugu dambeyntiina, shirkado badan oo ah kuwa gawaarida ka hortaga faafitaanka viruska ee Turkiga ayaa hakiyay wax soo saarkooda si loo ilaaliyo caafimaadka labada shaqaalaha. Qeybta baabuurta, oo dhoofinta in ka badan 80 boqolkiiba dhoofinta ay u dirto waddamada Midowga Yurub, waxay bilaabeen inay kala kulmaan carqalad iyo qasaaro weyn. Sidoo kale, waxaa jira hoos u dhac aad u daran oo ku yimaada iibka aaladaha alaabada baabuurta. In kasta oo soosaarkii karantiil la carqaladeeyey warshadii weynayd, warshadii-hoosaadka ayaa sidoo kale joogsatay. Turkiga muddadii u dhexaysay bilihii 341aad-136aad marka la barbar dhigo isla muddadi sanadkii hore wuxuu hoos udhacay boqolkiiba 14 wadarta guud ee waxsoosaarka oo gaadhay 276 kun 348 gogo '. Dhoofinta ayaa ahayd XNUMX kun XNUMX unug, iyadoo XNUMX boqolkiiba ay hoos u dhacday marka loo eego sanadkii la soo dhaafay. Hoos udhacani, dabcan, waxay sidoo kale saameyn ku yeesheen logistikada baabuurta waxayna sababeen khasaaro weyn oo soo food saaray ganacsigii.
Caqabadaha ku saabsan soo saarista alaabada laga keenay Yurub ayaa waxaa weheliya dhibaatooyin la xiriira soo saarista alaabada laga keenay Yurub taas oo ay ugu wacan tahay kala-goynta amarka oo ay ugu wacan tahay kala-goysyada xun ee suuqa EU, isgoysyada xuduudaha iyo carqaladeynta iyo gaabisyada dekedaha. Natiijooyinka ka soo baxay daraasadaha awgeed, soosaarka baabuurta ee 2020 ayaa la filayaa inay si aad ah hoos ugu dhacaan. Sida ku xusan macluumaadka la siiyay labadii bilood ee ugu dambeysay ee sanadka, muujinaya koror 90 boqolkiiba marka la barbar dhigo sanadkii hore gaariga gawaarida iyo suuqyada ganacsiga ee suuqyada fudfudud ee Turkiga ayaa kordhay dabayaaqadii Maarso markii ay hoos u dhacday ilaa 40 boqolkiiba. Yurub dhexdeeda, waxaa lagu sheegaa in iibinta iyo waxsoosaarku ay qandaraas ku galeen qaybta 70-90 boqolkiiba marka loo eego sanadkii hore. Inkasta oo saameyntaan xun la filayo in la dareemo rubuc-sannadeedka labaad ee sannadka, iibka Shiinaha wuxuu dib uga soo kabsaday wax yar bishii Maarso, taasoo rajo siineysa waaxda. Xaqiiqda ah in Shiinuhu bilaabay inuu siiyo kaalmo lacageed kuwa iibsada gawaarida si ay ugu soo nooleeyaan iibka suuqgeeda gudaha, oo ah suuqa ugu weyn aduunka, waxaa loo qaddariyo inay tahay tallaabo muhiim u ah suuqan si uu cagaheeda isugu taago.
Intaa waxaa dheer, dhibaatooyinku waxay kusii socdaan firfircoonida warshadaha logistics. Gawaarida wadooyinka ayaa yaraaday darawallada ka soo laabanaya wadamada khatarta ku jira sidoo kale waa lagu karantiilay irdaha xuduudaha. Maraakiibta ayaa dib uga bilaabay qaar ka mid ah safarradooda dekedo aad u yar waxayna baajiyeen safarradii kale sababo la xiriira hoos udhaca kontaynarrada kontaynarrada adduunka. Ku soo noqoshada weelka madhan ee waddankeenna wuxuu bilaabay inuu soo daaho markii la joojiyey soo dejintii aan ka imanayay Bariga Fog. Waxaa jira baahi sii kordheysa oo ku saabsan gadiidka tareenka, laakiin kaabayaal la'aan iyo awood la'aan awgeed, hufnaanta la doonayo lama heli karo. Inta badan shixnadaha xamuulka ah waxay galeen diyaaradda sababo la xiriira carqaladeynta wadada iyo biyaha. Xooggan awgeed, ayaa wakaaladaha xamuulku hawlahooda ka hawl geliyeen diyaarado xamuul inkasta oo kharashkoodu aad uga badan yahay hadana waxay isku dayayaan inay buuxiyaan baahida sii kordheysa.
Ethem Sancak arkay iman kara ee Midowga Yurub ee Turkey
Mashruuca Transmission-ka ee Izmir: "Khatar culus oo ku wajahan flamingos İzmir
Gaadiidka tareenada iyo gawaarida warshadaha waxay yimaadaan OIZs | Bursa
Suuqgeynta Turkiga ee Jarmalka
Dabak waxa uu ka sheegay sahayda
Ceva waxay heshay abaalmarin heer sare ah oo ku saabsan sahayda khatarta sare leh
Mashruucyada waaweyn ee gaadiidka ayaa kor u qaadaya khidmadaha guryaha
Waxaanu la kulannay halis ah Hitachi Havaray
Washington Metro waxay la kulantaa dhibaatooyin halis ah
Wasiirka Arimaha Dibada: "Maalgashiga Bariga Dhexe wuxuu Sameeyaa Faa'iidooyinka Aad u Daran"
alaabada iibka alaabada baabuurta
U yeel qolka nadiifinta dabiiciga ah iyo geedaha noloshaada!
5 Xeerar Dahab ah ee Loogu Tala Galay Seo Work
Diyaarinta 'Xarfaha Ciyaaraha' ee Ciyaaraha
Shaqaalaha Warka Wanaagsan ee Dhallin-yarada ah ee ka faa'iideysanaya Ilaalinta Gobolka!
Bandoowga ka yar da'da 20 sano miyaa kor loo qaaday? Goormaa 0-18 sano bandoogu jiraa? Dadka Da'doodu Ka Weyn Tahay 65 Jir Ma Heli Kara Wadada?
Bilal Ekşi, Maareeyaha Guud ee Shirkadda Duulista ee Turkish (THY), oo loo hakiyey cudurka daacuunka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' (Kovid-19) oo mar kale duulimaad bilaabi doona bisha Juun, [More ...]
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Madaxtooyada Turkiga. Dr. İsmail DEMİR wuxuu sameeyey bayaanno muhiim ah inta lagu gudajirey guddiga qadka intarnetka ee ay qabanqaabisay SETA Foundation. ALTAY Main Dagaal Tank (AMT) Mashruuca [More ...]
Xanuunka Xanuunka ee Tareenka